လူလူချင်း ချစ်တာ အပြစ်လား? | သိလိုရာမေး
ထွေလာဆန်းပြား လိင်ဆောင်းပါး လူလူချင်း ချစ်တာ အပြစ်လား?
မကြာသေးခင် ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကမှ သခင်မြပန်းခြံမှာ LGBTQ အသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ဂုဏ်ပြုတဲ့ပွဲကို ပြုလုပ်ခဲ့တာ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။
LGBT လို့ပြောရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ သိပ်မကြာသေးတဲ့ ကာလတစ်ခုကစပြီးမှ လူပြောများလာတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ရပ်ဆိုတာ မမှားပေမယ့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့ ဒီလို လိင်တူချစ်သူတွေကို လက်ခံပြီး အားပေးကြတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေက ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ် နောက်ပိုင်းမှာထဲက ရှိခဲ့တာကို Wikipedia က မှတ်တမ်းတွေအရ သိရပါတယ်။
ခုခေတ်မှာ Gay လို့ပြောလိုက်ရင် လူတွေအားလုံးက လိင်တူချင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ ယောကျာ်းလို့ပဲ ခပ်ပေါ့ပေါ့လေးမြင်တတ်ကြပေမယ့် နက်နက်နဲနဲပြောရမယ်ဆိုရင် Gay ဆိုတာ Culture လို့ခေါ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ Indentity လို့ခေါ်တဲ့ မိမိရဲ့ Character အစစ်အမှန်ကို ရည်ညွှန်းမှု နဲ့ Gene လို့ခေါ်တဲ့ နဂိုဗီဇဆိုတာတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဒီလို ဆက်စပ်ပြီးတော့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံယူချက်တစ်ခုကို စွဲကိုင်ထားတဲ့ လူတွေကို လက်ခံအားပေးဂုဏ်ယူတဲ့ လူတွေရှိသလိုပဲ ဝေဖန်ပုတ်ခတ်တဲ့လူတွေလဲ ရှိနေတာ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။
ဒီတော့ ၂၁ ရာစုခေတ်မှာ သာမန်လူတွေထက် လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုက နည်းနည်းတော့ မွန်းကျပ်စရာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ခုတစ်ကြိမ်မှာ သိလိုရာမေးကနေ LGBTQ အသိုင်းအဝိုင်းထဲက လိင်တူချစ်သူတွေအတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ရှိထားသင့်တဲ့ ခံယူချက်လေးတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
(၁) ကိုယ့်ရွေးချယ်မှု ဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်…
လိင်တူချစ်ကြတဲ့သူတွေ တော်တော်များများပြောကြတဲ့ စကားတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ “ကျွန်တော်တို့လဲ ဒီလိုဘယ်ဖြစ်ချင်ပါ့မလဲဗျာ… သာမန်အတိုင်းပဲ ဖြစ်ချင်တာပေါ့” ဆိုတဲ့ စကားပါ။ ဟုတ်ပါတယ်… ကိုယ်က ဒီလိုမျိုး ယောကျာ်းချင်းပဲ သဘောကျမယ်ဆိုပြီး ရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုနဲ့ ခိုင်ခိုင်မာမာ လုံးဝ Serious ကြီးဖြစ်နေတဲ့လူ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ မွေးကတည်းက ဒီခံယူချက်တစ်ခုက ပါလာတဲ့အတွက် ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ ဒီကြောင့်မို့လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပိတ်လှောင်ပြီး အများစကားတွေကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျ စိတ်အားငယ်နေဖို့ မလိုပါဘူး။
(၂) ကိုယ့်ကိုကိုယ် လက်ခံရဲတဲ့ သတ္တိအရင်ရှိဖို့လိုတယ်…
ကိုယ်တိုင်ကမှ ကိုယ့်ရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံယူချက်၊ လိင်တူချင်း ချစ်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုတေွ၊ တခြားသူတွေနဲ့မတူတဲ့ အရာတွေကို လက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိဘဲ ဝေဝေဝါးဝါးဖြစ်နေမယ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျနေမယ်၊ ယုံကြည်မှုတွေ လျော့နည်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ တခြားသူတွေက ကိုယ့်ကို လက်ခံလာဖို့ဆိုတာ အိပ်မက်တစ်ခုလို ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ သူများက ကိုယ့်ကို လက်ခံအားပေးတာလိုချင်ရင် အရင်ဆုံး ကိုယ်က ဘာလဲဆိုတာ တိတိကျကျသိပြီး အရှိကိုအရှိအတိုင်း လက်ခံတတ်ဖို့လိုပါတယ်။
(၃) မဖြစ်မနေ ကွယ်ဝှက်ထားစရာ အကြောင်းမရှိပါ…
လူငယ်တွေကြားထဲ နောက်ပြောင်ပြီး ပြောနေကြတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ “ဒီကောင်ကတော့ ဟိုကောင်မလေးကို ကာဗာတွဲတာလေ… Gay နေတာကို ဖုံးကွယ်ဖို့” ဆိုတာမျိုးတွေ၊ မိန်းကလေးတွေဆိုရင်လဲ “ငါတော့ ရှသွားပြီ” ဆိုပြီး နောက်ပြောပြောတာတွေ ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါတွေက ဟုတ်သော်ရှိ၊ မဟုတ်သော်ရှိ… ပြောချင်တဲ့ပစ်မှတ်ကတော့ တစ်ခုထဲပါပဲ။ ကိုယ်ကိုကိုယ် ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ လိင်တူတွေကို ပြောချင်တာပါ။ လူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုမှတော့ ကိုယ်က ဘယ်လိုပဲနေနေ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အပြောတွေကို လွတ်အောင် မရှောင်နိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ ကိုယ်က မဖြစ်မနေကြီး မဟုတ်တာကို အဟုတ်လုပ်၊ အတင်းအဓမ္မ ဟန်ဆောင်ပြီး နေဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုနေနေ ပြောကြမယ့်တူတူ ကိုယ့်ပုံစံကို အမှန်ချပြပြီး ရဲရဲဝင့်ဝင့်နေမယ်ဆိုရင် ပိုပြီးတော့တောင် လေးစားစရာကောင်းနေပါလိမ့်မယ်…
(၄) မင်းတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်တာ သတိရပါ…
ခုဆိုရင် ၂၁ ရာစုမှာ စမတ်ဖုန်းတွေ၊ အင်တာနက်တွေ ရှိလာတဲ့အတွက် ကမ္ဘာနဲ့တဝန်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီသိနိုင်တာ ကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲ။ လိင်တူချစ်သူတွေအနေနဲ့ “ငါ့ကျမှ ဒီလိုဖြစ်ရတယ်” “ကြုံရတယ်” ဆိုပြီး စိတ်အားငယ်၊ ထိုင်ညည်းနေဖို့ မလိုပါဘူး။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ LGBTQ တွေနဲ့ပက်သက်ပြီး အကြံပေးဆွေးနွေးတဲ့ နေရာတွေ၊ အသိုင်းအဝိုင်းတွေ၊ ထောက်ခံအားပေးတဲ့ သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ကို Gay ဖြစ်နေလို့ ဝေဖန်အပုပ်ချနေတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ အတင်း Fit ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေဖို့မလိုပါဘူး။ တန်ဖိုးသိတဲ့လူဆီမှာပဲ တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုလက်ခံအားပေးသူတွေ၊ ကိုယ်ဖြစ်နေလို့ကို ချစ်နေကြတဲ့ လူတွေဆီမှာ အချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာ ပြောချင်တာတစ်ခုကတော့ လိင်တူချစ်သူတွေကို လက်မခံ၊ အားမပေးနိုင်ကြတဲ့ သူတွေအနေနဲ့လဲ လက်မခံရင်နေပါစေ၊ အဆင့်အတန်းခွဲခြားတာတွေ… ဆိုးဆိုးရွားရွား ဝေဖန်အပုပ်ချတာတွေမလုပ်ဖို့ အကြုံပြုချင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လိင်တူချစ်သူတွေအနေနဲ့ ဒီ ၄ ချက်ကို သတိတရလက်ကိုင်ထားပြီး ဘဝခရီးလမ်းကို ပျော်ပျော်ပါးပါး ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေကြောင်း သိလိုရာမေးကနေ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…